Matatu Mapurogiramu Aunofanirwa Kumhanyisa Yako Ecommerce Bhizinesi Zvakakodzera | Martech Zone
Matatu Mapurogiramu Aunofanirwa Kumhanyisa Yako Ecommerce Bhizinesi Zvakakodzera
Chipiri, Zvita 18, 2018 Muvhuro, Ndira 27, 2020 Sarah Saker
Kune akawanda ecommerce vatengesi kunze uko - uye iwe uri mumwe wavo. Iwe uri mairi kwenguva refu yekutakura. Saka nekudaro, iwe unofanirwa kukwanisa kukwikwidza neakanakisa emazana ezviuru ezvitoro zvepamhepo izvozvi zviri paInternet nhasi. Asi unozviita sei?
Iwe unofanirwa kuona kuti webhusaiti yako yakaita seyi kufadza sezvinobvira. Kana isina kugadzirwa zvakanaka, haidaro vane zita guru, mafonti ako madiki kwazvo (kana akakurisa), logo yako inosangana mukati nekumashure kwechitoro chako chepamhepo, mabhatani ekufambisa ari munzvimbo yakaoma (funga yekutsvaga bar!), Kana kana iwo mavara awasarudza pane webhusaiti yako isingashande nemagariro auri kutengesa, ipapo uchafanirwa kufunga zvakare dhizaini yako. Ndipo paunotangira.
Kana yako ecommerce chitoro iine nyanzvi inzwa nazvo, ipapo unofanirwa kutarisa zvigadzirwa zvauri kutengesa. Ndidzo dzinokwezva kune vateereri vakakura, kana iwe uri kunangana neboka rakanangana nevatengi? Chero nzira yakanaka, asi inogona kukanganisa kubudirira kwako kana usiri kupa kune vako vatengi. Zvakare, zvinhu izvi zvemhando yepamusoro, kana zvakachipa zvinotengwa kunze? Kana zvigadzirwa zvako zvikaparara, saka newewo uchaita kudaro.
Tarisa uone yako Marketing. Uri kushambadzira sei bhizinesi rako? Ndeapi masayiti auri kushambadza pane uye anoshanda sei iwo mapuratifomu? Iko kushandiswa kwakanaka kwemari yako here? Ita shuwa kuti iwe urikutora iyo hombe bang kune yako buck uye kuedza kwako kuri kushanda sezvinobvira.
Kana zvese izvo zviri kushanda, saka inguva yekugadzirisa bhizinesi rako. Kana zvese zvimwe zviripo, unogona kutanga kutarisa ako ega maitiro uye mashandiro ekuvandudza sevhisi yevatengi, kumhanya kwebasa, uye kugadzirisazve zvigadzirwa.
Kuti ikubatsire nezvinhu izvi zvebhizimusi rako, tinokurukura mamwe emhando dzakanakisa maapplication aungave nawo kutarisira yako ecommerce chitoro.
The Google Analytics app inokupa iwe mupendero mune zvese zviri zviviri zvekushambadzira zvebhizinesi rako nekutengesa. Iyo app inokutendera iwe kuti uteedzere yako webhusaiti kushanya. Iwe unogona kuona iyo nhamba yekutarisa peji rega rega riri kugamuchira. Iwe unogona zvakare kuona iyo nhamba yekushanya kwavanowana pamusoro penguva, yakatarwa nemasefa iwe awakaisa muapp.
Iyi Anwendung inoita kuti iwe uone iko kunoonekwa nemaonero. Ruzhinji rwevatengi vako tarisiro inogona kunge ichitenga yako ecommerce saiti kubva mhiri kwemakungwa uye iwe usingazvizive. Kuona izvi zvinotungamira zvinokutendera iwe kuti uchinje rako bhizinesi modhi uye uwane yako online chitoro zvakanyanya kune vekunze vatengi vanofarira kutenga zvigadzirwa zvako.
Zvakare, nekuona iwo mapeji ari kutengesa, iwe unogona kuona mhando dzezvigadzirwa izvo vatengi vako vari kutenga. Izvi zvinokupa iwe mukana wekubvisa chero zvinhu zvisiri kutengesa uye kuunza mutsara wezvigadzirwa izvo vatengi vako zvavanoda.
Saina kuGoogle Analytics
Ichi chishandiso chinoshamisa! Zvidhina uye matope mabhizinesi vanofanirwa kuvimba neyakajairika modhi yekupa zvitoro zvavo nezvigadzirwa: vanofanirwa kutsvaga vatengesi vanotakura zvigadzirwa zvavanoda kutakura muzvitoro zvavo, vobva vatenga muhuwandu hwakawanda kuti vawane akanakisa emitengo (kana nekuti wholesaler inoda hushoma odha saizi kuti isvike).
Ipapo vanofanirwa kumirira kuti chigadzirwa chiuye masvondo anotevera. Muchiitiko nevatengesi veterevhizheni vakaita saWal-Mart uye Target, zvinhu zvekutengesa zvinofanirwa kutanga zvaendeswa kunzvimbo yekugovera zvisati zvarongeka, zvotakurwa kuchitoro chimwe nechimwe, zvobva zvatumirwa kuzvitoro zvakasiyana.
Ecommerce vatengesi vanovimba nevatengesi vechinyakare kune mazhinji ezvigadzirwa zvavo. Asi nguva dziri kuchinja, uye Oberlo ari kupa zvidiki, online zvitoro nzira iri nani yekutengesa zvigadzirwa zvavo.
Panzvimbo pekutenga kubva kumutengesi muhuwandu, haufanire kuhodha chinhu - zvirinani kusvikira mutengi aisa odha. Oberlo inokutendera kuti uunze zvigadzirwa kubva kuzviuru zvevatengesi zvakananga kuchitoro chako chepamhepo. Iwe unozobva waisa mutengi wevatengi nemutengesi. Iye mutengesi anozobva adonhedza chikumbiro kugedhi repamberi remutengi.
Uku ndiko kushanduka kukuru kune chaiko mutengesi / hukama hwekutengesa nekuti mutengesi haafanire kubhadhara yakawanda zvigadzirwa. Chinhu chacho chinongobva chakananga kubva kune mutengesi kuenda kumutengi.
Bhalisa mahara kuOberlo
SalesforceIQ ndeimwe yeakanakisa maapplication ako Customer Relationship Management. Iyi Anwendung inokupa iwe kugona kupindura kune vatengi nyaya; kana paine dambudziko mumaitiro, vatengi vako vanonyatso kukuzivisa iwe. Iyi CRM app inokutendera kuti upindure kumatambudziko iwayo, zvese kubva pakuona kwevatengi uye nemaonero ako emukati. Unogona kutanga kugadzirisa kudambudziko ipapo ipapo.
SalesforceIQ inosanganisa ese ako enhau midhiya chiteshi mune imwe yepakati chikuva. Iwe unogona kusvika kune vako vanofara vashanyi uye nekudyidzana navo, uchivatenda nenzira iyo vese vanogona kuona. Iwe unogona zvakare kusangana neshamwari uye shamwari dzeshamwari dzevatengi vako nechinangwa chekuvashandura kuva vatengi vatsva. Neichi chirongwa cheCRM, unogona kugadzira bhizinesi rekudzokorora pamwe nekutanga matsva matsva emari kuchitoro chako cheecommerce.
Neaya maapplication, iwe uchave unokwanisa kubata rako bhizinesi zvakanyanya zvinobudirira uye zvine hungwaru. Iwe unozogona kuchengetedza yako chigadzirwa kusarudzwa uye mu-masheya iwe uchitora mukana wekubatana pamwe nevatengesi nevatengesi kuitira kukurumidza kudzoreredza.
Iwe zvakare uchakwanisa kubata ako mutengi hukama uye kudyidzana, uye musika kune vanogona vamwe. Kuongorora kutengesa kubva kune izvi maapplication zvakare kuchakupa iwe kugona kuita kune zvebhizimusi mafambiro munguva chaiyo, zvichikupa iwe mukana wekuwedzera kutengesa musi iwoyo iwoyo
Kubudikidza nemaapps aya, iwe unozoita kuti rako bhizinesi riwedzere kushanda uye kukwikwidza.
Saina Chikwangwani kune Yemahara SalesforceIQ Trial
Tags: ecommercevatengesi vanokosha
Sarah Saker murairidzi webhizinesi uye munyori wekuzvimiririra uyo ane hunyanzvi mukubatsira maSMB maitiro ekumisikidza rutsigiro rwevatengi uye kukura kunofungidzirwa. Kana asiri kunyora kana kudzidzisa, Sarah anogona kuwanikwa paari (diki, asi achikura!) Purazi remhuri. Bata naSarah mberi nezve.me/ssaker yekudzidzisa kana kunyora rubatsiro.